Jaarmiyaaleen Muslimoota Itoophiyaa 3, ajjeechaa Artist Haacaaluu balaaleeffatan | NuuralHudaa
Ibsa Badr Ethiopia Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa ilaalchisee baase. Guutuu ibsa kanaa gadiitti ni argatu.
Jaarmiyaaleen hawaasa Muslima Itiyoophiyaa biyya alaatti argaman 3, ajjeechaa Artist Haacaaluu Hundeessaa irratti Kibxata dabre raawwatame kan balaaleeffatan yoo tahu, gadda itti dhagahame ibsatanii jiran.
Haala yeroo irratti ibsa kan kennan jaarmiyaaleen kunneen, Mootummaan qaamolee badii kana raawwatan hatattamaan ummataaf akka ifoomsuus gaafatan.
Jaarmiyaaleen kunniin Ameerikaa kutaa Virjiiniyaatti kan argamu Selam Foundation, achuma kan argamu ammaas Badr Ethiopia fi Kanadaatti kan argamu Fooramii Ulamaa Itoophiyaa biyyoota alaa jiraatanii(International Forum of the Ethiopian Muslim in Diaspora) jedhamani.
Akka Badr Ethiopia ibsetti “Haacaaluu Hundeessaa namoota jijjiirama siyaasaa biyyattiitti argameef qabsaawan jidduu tokko. Ajjeechaan kun sababa inni yaada isaa walabummaan ibsateef irratti raawwatame. Kanaaf mootummaan qaamolee yakka kana raawwatan hatattamaan ummataaf ifa godhuu qaba. Seerattiis dhiheessuu qaba.” jedhe.
Itti dabaluunis jaarmiyaaleen kun mootummaan nageenya lammilee biyyattii akka eegsisuu qabu gaafatan.
Rahima shaasheee says:
Rabbiin dhigaa isaa nuf haa basuu inshaallaah
yaa rabbii dhugaa basii atii argaa dhagahadhaa
wantii hunduu siif iftuudhaa 🤲🤲🤲🤲😭😭😭😭😭
yarabi ati inargita wahunda dhuga nuf basii